Sakoroka sy fampiasan-kery : Tsy hihemotra ny fidinana an-dalambe – MyDago.com aime Madagascar
Sakoroka sy fampiasan-kery : Tsy hihemotra ny fidinana an-dalambe
Ho sarotra ny hivahan’ny krizy. Nanomboka ny fitarihana vahoaka hidina an-daalambe ny teo anivon’ny Avotra ho an’ny firenena, omaly. Niaraha-nahita ny vokany na efa nampiomana aza ireo mpitarika. « Nanapa-kevitra hidina an-dalambe, eny amin’ny Kianjan’ny 13 mey izahay, ny 22 jolay, (omaly) ho fitakiana ny hanaovana ny fifidianana”, hoy ny filoha nasionalin’ny Avotra ho an’ny firenena, Razafimanantany Emile, tamin’ny mpanao gazety. Nambarany fa anisan’ny tokony hanavotra ny firenena koa ny mpitandro filaminana raha migadona eny, araka ny nambarany. “Tokony hiaro ny vahoaka izy ireo”, hoy ihany izy. Tsiahivina fa manana kandidà ho filoham-pirenena ny Avotra ho an’ny firenena dia Andriamatoa Laza Razafiarison izay nidina nisakoroka teny an-daam-be mihitsy. Nampiasan’ny mpitandro filaminana ny habibiany indray ny vahoaka maneho hevitra ampilaminana. Baomba mandatsa-danomaso am-polony no napoapoaka handroahana ny mpanao fihetsiketsehana, nitsoaka vetivety anefa ny olona dia niverina eo ihany. Ny hany herin’ny bebaoty dia naka an-keriny ny fanamafisam-peo. Mbola tsy tapitra hatreo anefa ny tantara fa mbola namoaka “megaphone” indray ny mpanao fihetsiketrehana, ny farany dia niroso tamin’ny fisamborana sy ny fampiasan-kery tanteraka ny mpitandro filaminana, vokany 10 ny olona voasambotra. Tsy hijanona eo anefa izany.
« Mihoa-pefy ny fomba fitantanan-dRajoelina. Tsy maintsy mandray fepetra hentitra ny samy Malagasy, na inona na inona hevitry ny Gic. Havaozina tanteraka izao rafitra izao”, hoy kosa ny avy amin’ny Komitim-panavotana an’i Madagasikara (KPM), Rasolo René, tamin’ny mpanao gazety tamin’ny faran’ny herinandro teo.
Efa nofaritan’i Alain Andriamiseza fa hiditra etsy amin’ny Kianjan’ny demokrasia etsy Ambohijatovo izy ireo ny asabotsy izao. “Rodorodom-panavotana ny firenena na fidinana an-dalambe ny hetsik’izy ireo: tolona fametrahana fanjakana tan-dalàna hikarakara fifidianana”, hoy izy.
Fanohanana ny FFKM
Tsy mbola fantatra kosa ny ho thin’ny hetsika fanohanana ny fehinkevitry ny FFKM na efa nanandrana namory vahoaka tetsy Andrefan’Ambohijanahary aza ny asabotsy teo. “Ny FFKM ihany no heverinay ho mpanelanelana atokisan’ny Malagasy, ary hany mahavaha olana amin’izao krizy politika izao. Tsy mahavaha olana ny tondrozotra sy ny vondrona iraisam-pirenena, mpanelanelana”, hoy izy ireo.
Hitondra ho amin’ny fitoniana hamahana ny krizy politika ny famoriana olona sy fidinana an-dalambe?
Ny manampahaizana matahotra fampiasan-kery, fa ny mpampiasa hery tsy manampahaizana
MAGRO BEHORIRIKA : FOTOANA HANEHOAN-KERY IZAO
Auteur Solo Razafy*Publié le 23 juillet 2013 23 juillet 2013 Catégories Politique
30 pensées sur “Sakoroka sy fampiasan-kery : Tsy hihemotra ny fidinana an-dalambe”
23 juillet 2013 à 7 h 36 min
Tena inona loatra aza no tadiavin’ireo olona mandefa miaramila ireo é ? Mila filaminana va sa t-sia é ! Izao vao mazava fa mahazo vola foana ireo mpandefa azy ireo. Soa ihany fa tsy maintsy hisy ny farany é !
Fanao ny mankany an-dalam-be rehefa mitady zavatra na inona na inona lazaina.
Asa re rey olona fa aleo mivavaka hitsaharan’izao zavatra izao.
Mankalaza ireo sahy mijoro aloha e ! Efa hezaka lehibe izao !
Fa ity kely hoy ny mpandrafitra!
Efa nahasahy nihetsika izao ny vahoaka, ka iriana hitohy fa midongy tsy mely miala amin’ny HAT ny mpanongana.
Moa ve tsy tsara raha toerana telo na efatra no indray manao hetsika toy izao ?
Ary aza adinoina ny sora-baventy fa zava dehibe izany ho an’ny fampitàna vaovao ERAN-TANY ( INTERNET io)
Manohy ny hezaka ataon’i Mamy Rakotoarivelo sy Me Hanitra RAZAFIMANANTSOA dia :
Manainga an’i Rtoa Lalao RAVALOMANANA izahay mba HIANTSO ireo Antoko rehetra manohana an’i Dada , MBA HIARA DIA AMINY: HAMPIALA AN’i RAJOELINA.
Na tsy hanohana azy aza, fa MIANTSO HIRAY HINA SY hanao HETSIKA MIARAKA.
23 juillet 2013 à 9 h 33 min
Sinema manara-penitra daholo ê !
Nipingapinga nanohana mpanongam-panjakàna, dia izao efa potika ny firenena vao hoe mihao-pefy ê, katsaka ê , tsaramaso, voanjobory !
Adversaires-n’ny mpanohana ny ara-dalàna daholo ireny, satria tsy mahafantatra an’izany atao hoe ara-dalàna izany !
23 juillet 2013 à 9 h 50 min
Marina araka ny voalaza fa ny tondrozotra sy ny mpanelanelana dia « tsy nahavi’azy » hatram’izay ary tokony hofafàna io langazy io. Resaka fampandriana adrisa fotsiny ny nataon’ireo hatrizay ary tsy azo hekena intsony. Efa efa-taona izay dia aiza ? Mbola hampiana firy koa ? Tssssssss !
Tsy misy maika amin’izany fifidianana izany izao ê ! Mbola tsy vonona isika, ary ny tondrozotra maha voky tsara !
Any amin’ny 2016 na 0200 any angamba isika malagasy vao hifidy izany !
Ilay domelina efa nomena titra ho Chef d’Etat, izay tsy azo esorina avy eo amin’ny toerana nametrahan’azy, satria ny fanesorana na fanonganan’azy, dia fandikàna an’ilay Tondrozotra !
Mba anontanio anie ilay ramatoa mpahay Lalàna izay ê ! Ry zareo no nanao sonia, ka mahafantatra tsara !
23 juillet 2013 à 10 h 10 min
2022 no saika soratako etsy ambony, fa sorena laotra dia diso ny vosoratro ; ary manantena fa ho diso fihevitra koa amin’ilay daty !
Hay ve ilay io e???hihihiiiiiii tadidiko ledala io ilay niboredika bue hoe:
« prezdà rajoelina » teo @ fahita lavitra ,saika notorahako vonikaazo ihany fa
vao hitako ny tavany dia litika aho.
…f arehefa hetsika manohitra izao fitondram-poza izao kosa dia MANKASITRAKA e!!!nefa tsy aleo ve hatambatra
@’izay ilay hery???tsy efa ampy ve izay fitsitokotokoana izay ????avelao hataony rehefa tsisy hanao e!!!izay
mahery voanjo manta, fa ny anay neny ihany ô!!!!
Rehefa avy mamantsika ilay seza dia miatsaraivelatsia manao fitaovana vahoaka indray koa inona moa???
Litika daholo , te ho derain’ny alika fa hoe » prezdà » dia avy eo vao mody katsaka ahoe vonemba e
efa tara !!!nenina tsy eo aloha hanannatra.
Raha vao olona koa no milaza ity fanetribem-pirenena ho » FILOHA « dia efa TSY LASA LAVITRA FA MIREFAREFA e!!!
TONGA DIA ADABOY !HILAOZY LAVITRA FA MAIMBO FOZA eeeeeeeee na iza io na IZA rehwfa namoaka io teny
MAMOEHITRA IO DIA TOKONY TSY HAMAHAN-DALITRA VAHOAKA INTSONY FA FOZA eeeeeeeeeao anatin’izany
i KOTOVELO izay mbola tsy mahalala.
Izay osa kamo aho ry Léon, sa tena ialahy !
Ka rehefa eo ihany ianao dia antsoy ry Fetison, Rajemison, Ny Rado, ets…, miampy an’ireo foza isan-karazany izay kandidà mpanohitra an’i Neny daholo ê !
Nahoana ry zareo ireo no lasa hirotsaka ho fidiana, fa tsy manohana ny mpanongana mazàva, na koa MIARAKA AMIN’NY TENA MPIARO NY ARA-DALÀNA ARY MANOHANA AMPAHIBEMASO AN’I RAMATOA RAVALOMANANA ?
Aza mora fitahana re ê !
Misy madama be adinonao izay tena danza be !
23 juillet 2013 à 13 h 24 min
Ka seza io koooh!!!izy aza ity efa mikôstara sahady hihihiiiii
ary toa ilay mpiambina mihintsy no nosamboriny???tena efa tssssssss
Mampalahelo ilay voasambotra kosa aloha e!!!aza dia mety hatao fitaovana zalah fa mampalahelo a!!
jereo tsara aloha izay hitolomana sy himatimatena.
Za lesy efa mody fanina dia mbola……… tsy tsara kosa ny manome alahelo ny hafa e MDR
Olona iray malahelo ve atakalona vahoaka 20 millions ? Mijaly tena mijaly anie ny vahoaka ry nao â !!!!
Ary tena faninana sa mody fanina ? Tsy tafavoaka hoy aho isika mianakavy amin’ity mody-mody lava ity !
Tena mody an-tanindrazana ihany ny Filoha Ravalomanana, no tena bian ! Rahoviana izy no hody ?
Anjaran’ny tsirairay no mandinika fa ny anay dia i Lalao Ravalomanana no kandida tianay ho fidina.
24 juillet 2013 à 4 h 44 min
ny azo antoka aloha dia nahazo galona lery eo imason’ny vahoaka satria sahy nidina an-tsehatra… vato iray naroson’ny mpanohana an-drajoelina iny aloha!
o km: arak’ilay lien nalefan’isé t@ iry herinandro, mahakasika ny fameuse 4è république
Efa ao amin’io izany isika raha zohina ny voasoratry ny prof firantay de souche Tssss ==> ilay présentation aza basse qualité pour un individu … enseignant dans université Français –
A première vue et lecture en superficie, rien que des VAURIEN,
Le type me fait penser par exemple = à l’image du ventriloquet (matavin-JABORA)avocat sudAf recruté par RatsianaOrana
propageant des fausses notes à travers l’Afrique et relatives au notable Président Marc Ravalomanana
24 juillet 2013 à 5 h 51 min
Ilay domelina efa nomena titra ho Chef d’Etat,
etsy andaniny lany t@ alalan’ny réferendum Desambre 2010 ny constitutions pour
entre parenthèses: eo amin’io kion-dalana io dia falehako in-droa daily!!
Omaly atoandro 2camions feno miaramilam-potaka.
Androany @ 10ora atoandro indray izany?
Kely aina koa ireo bodegany ireo: tonga dia mitifitra à balle réelle rehefa tandrohan’ny boay kely.
Hay nisy naratra balle réelle omaly manodidina ny croix rouge?
Sao dia hebergé tao @ Ambassade du côté opposé ary ilay tireur k’ity
Hotelin’ilay ambassade io ihany koa ilay miditra ny arcade (dans même environnement)
24 juillet 2013 à 8 h 00 min
Ny SADC ( CHISSANO ) etsy andaniny koa, milaza fa NY CONSTITUTION-N’NY III ème REPUBLIQUE IHANY NO FANTANY !
Dia mba ho aiza isika mianakavy amin’izany rehetra izany ?
24 juillet 2013 à 8 h 10 min
Dia ahoana koa ity lazaina fa CES, kanefa « mpanao paolitika » ny ankamaroany, ary handidy sy hanapaka ?
Tsy mandeha amin’izay laoniny intsony ny zava-drehetra, ary potika tanteraka ny firenena sy ny fianan-dramalagasy ê !
Alidera ! Sinema fotsiny ny an’i lery hoy aho ! Olona tsy manana poids ( au propre comme au figuré ) no « mody » mba mihiditra an-tsehatra, dia mba nahazo galona kely araky ny voalazanao, satria izay no mba tanjony !
Tsy i lery mihintsy na dia izany aza no hahazo 1%, raha HISY ny fifidianana !
Manonofy izay mbola manantena ny fisian’izany fifidianana izany ! Zavatra hafa mihintsy no tokony takian’ny vahoaka !
INONA AVY ????
tsy misy manohina ny fo loatra hatreto,
fehezina ihany koa ny énérgie tsy ho raraka an-tany!!
ilaiaky io efa t@ taona lasa no nieritra ny hi-braver ny miaramilam-potaka
fa hoy izahay hoe: raha vao anti-ra8 ==> mamofona foza ==> do not get trapped within their circle!
Tairina no mety @ ity raharaha ity fa lany andro ny vahoaka mitanin’andro eny @ Magro. Ilay « fihavanana sy pourparlers » efa gorodaorota ka tsy alehany intsony. Momba ireto hilatsaka hofidiana ireto dia io iany no hic hatramin’izay, antony mbola nahalany an’i RatsyIraka talohan’i DADA satria be loatra ny kandidà ka miparitaka ny vato. Ireo antoko maro ireo angamba no mety hopotehina fa raha tsy izany dia ‘zay no vita, aleo hidiana ny botika dieny izao toy izay hararyfo @ tsy antony eo.
Samia mieritreritra sy miomana ê ! Erinandro sisa dia ho fantatra ny tokony ho atao !
Averiko : Avant l’heure ce n’est pas l’heure ; après l’heure ce n’est plus l’heure !
Manao ahoana daholo fotsiny ny ankizy, sy ry ramose isany ?
24 juillet 2013 à 16 h 52 min
Ny aty aloha dia Salama daholo na dia somary raplapla iany aza noho ny hain-tany. Tsy hita moa fa dia samy manao izay sitrany hafalifalily satria ny dereglemà climatika mitaky, ny krizy manaikitra toy ny sansy etsy andaniny hihihi !
Koa dia miandry sy manatena zany RaKintana @ herinandro e !
25 juillet 2013 à 5 h 02 min
Mba nanokatra tv omaly hariva
samedi noir (izao); Alain ndremaseza
mialoha nitondra manazavana ny tao @ zandary, mampitandrina (toa ny fanaony)
saingy niova fiteny tsy toa an’i Risara Baomba hoe « ataonay mihinan’ny ampangony izay mahasaky manatona eo »
fa hoe: hisy infiltration HONO toa ny t@ date iray nilazàna hiantsona eny Ivato hihazo ny tanindrazany ny filoha hajaina Ra8,
tsy adinon’ilay mpanao récitation ny nampiseho ny karazam-basy hita t@ izany faniliana heloka fitadiavana bouc émissaire izany
TSY HO LAVA RESAKA aho
Mety hametraka olona anaty trano manodidina satria raha ny fahitako azy (cette vie de chienne que HAT nous impose nous a instruit appris à agir en conséquence aiguiser notre esprit en matière d’espionnage hihihi)
REPRODUCTION FILM archivé partout dans le monde de postage d’éléments tireurs lors du carnage d’Ambohitsirohitra en 2009. Et cela au sein des établissements soit karana (indo-pakistanais) et/ou français qui abondent le milieu commercial dans le quartier d’Analakely
NAZA e, Hotel de Fuck e
Comme dans tout état de non droit,
ALLEZ POURSUIVEZ LA ROUTE
faut denoncer EN MASSE
NE VOUS LAISSER PAS INTIMIDER DES L’AVANCE
C’EST PURE ET SIMPLEMENT DU TERRORISME EMANANT VERBALEMENT
disons un peu avant terme
DE CETTE « CIRGN » DE MALHEUR
25 juillet 2013 à 5 h 13 min
c’est eux qui n’hésiteront pas à tirer
le plus triste c’est que pas mal de ces militaires étaient, sont et seront
sous l’effet de drogue
et agissant de telle manière à n’obéir qu’à la mission qui leur sont incombée
==> tirer dans la foule
Faites attention et rappelons-nous du sort de la malheureuse BOUQUINISTE (Haja) la tête explosée par le tir provenant d’un fusil
que seuls les putshistes
et ainsi que ce qu’ils jugent épousant leurs couleurs MAFFIA tout azimut
ont droit de propriété
Io hetsika izay ho atao amin’ny asabotsy ao amin’ny magro io hoy aho, dia tsy mbola tokony atao ! Tsara ny miandry izay ho lazain’ny GIC-M sy UA ary SADC !
Arakarak’izay fanambaràna avoakan-dry zareo, ny hanaovana hetsika manarapenitra !
Efa mazava sy mibaribary ny teti-dratsin’ny mpanongana, ary baiko avy any ivelany io mba handotoana ny vahoaka malagasy mitaky ny rariny !
25 juillet 2013 à 9 h 42 min
Voalaophany aloha dia hisaorana be dia ireo izay nijoro t@ inny talata iny. Tsy mitsahara eo anefa ny hetsika . Isika rehetra dia aoka samy hitadidy na an-tsary na an-tsoratr na horonam-peo na inona na inona ireo GSIS , tsy mahay miady raha tsy @ vahoaka tokony arovany iahny. Izay ilay toe-tsaina foza ambany dia ambany. Mpamosavy malemy ka ny ao an-trano ihany no haripka. Ireo Frantsay sy Moazambikainana ary maorisianana mano tsinotsinona ny Malagasy anefa ts mba voakita. Tsy maintsy hivaly izao na ho ela na ho hainagana.
Izao koa ny porofo fa ady no ilain’ireo fahavalom-pirenena ka hadalntsika foana no mionana @ kabary sy ny fivavahana. Efa tokony hiday lalan-kafa @ izay izao. Tsy voatery hoe hifanatrika @ miaramila mitam-basay foana . Fa azo atao tsara ny sakodina rehetra.
LAZALAZAO : Bien dit !
Sakodina mihitsy no mila atao fa ela loatra izay nikabariana sy niaretana ireto bibidia mpanonganam-panjakàna ireto. Raha tena mijoro (sakodina) ny vahoaka dia DAVIDA sy GOLIATA no ady eo. Vitan’ny Vietnama fahiny ve tsy ho vitatsika ?
[LAZALAZAO dit: « Fa azo atao tsara ny sakodina rehetra. »]
26 juillet 2013 à 3 h 54 min
stratjia tsotra dia izao. Samy mijery ny tokan-tranona mpitandro filaminana eo akaikiny ao @ Fokontaniny. 1 na 3 farafahabetsany ao. Amboary avy hatrany fa tsy makaiza reo. Ra vo vita na malemy reo dia miongana ho azy Rajoelina. Aleo manangana zavatra vaoavao. Ampitapitao. Ra vo misy occasio de samy manao ny ao aminy. Reo matsy no tena fototry ny olana eto.
Marinamitsy fa tsisy zavatra hivoatra tsara eto ra tsy misy gitraka eto antanana. une fois pour toute. A
tsy vendrana zany oa ny malagasy ry foza orana isany a
Précédent Article précédent : Temps pour la SADC d’admettre sa défaite à Madagascar
Suivant Article suivant : RAVELONANOSY MAMY TIANA : Sasatry ny miarina ny FAT